Dj Khaled oo soo xertay saacad 300 Kun dollar ku fadhido.
Fanaanka iyo Dj ga weyn ee heesaha Mareykanka Dj Khaled oo isagu kasoo jeeda Falastiin ayaa waxuu ku xarakooday saacad gaareysa qiimaha 300 oo kun Dollar , taasoo lala wada yaabay maadaama ay tahay sacad aad qaali u ah.Saacaddan ayaa mid ka sameysan dheyman ayaa ah mid aan la awoodin qiimaheeda bals...
Fanaanadda Rihanna muuqaal cusub la timid, rasta ayay isku bedeshay. Daawo sawirada
Fanaanadda Rihanna ee kasoo jeedda jasiiradda ee Barbados ayaa waxey la soo baxday muuqaal cusub iyadoo gabi ahaanba bedeshay qaabkii timaheeda, una bedeshay hal mar kuwo tidcan oo raamo ah ee rasta loo yaqaan. Rihanna ayaa sheegtay inay waligeed ilaa 14 jirkeedii ku fekeri jirtay in ay timaha...
Kooxda Waayaha Cusub oo Mareykanka ka dagay kana tumi doono Show Minneapolis ka dhacaya. Daawo
Kooxda Soomaalida ah ee caalamiga ah ee dhalinta Waayaha cusub ayaa ka dagay garoonka magaalada Saint Paul ee mataanaha la ah Minneapolis ayagoo ku sugnaan doona maalmahan gobolkaasi Minnesota ee dalka Mareykanka si ay ugu tumaan xafad ka dhaci doonta magaaladaasi gaar ahaan Cedar oo ah degaan ay So...
Kim Kardashian: Diyaar uma aheyn inaan uur yeesho, ee caruurta kedis ayaan ku dhalay.
Diyaaraddii qaaska aheyd ee Ronaldo oo burburtay
Justin Bieber oo markale single noqday kadib gacalisidiisii Sofie ay kala boodeen.
fanaanka da'da yar ee caanka ah ee u dhashay Canada ee lagu magacaabo Justin Bieber ayaa haatan markale noqday single ama iskaabulo doob ah , kadib markii ay kala hareen gacalisidiisii uu jaceylka la jilaayay labadii bil ee lasoo dhaafay taasoo ah inanta modelka ah ee lagu magacaabo...
Qoyska leh dhaxalka Boqortooyada Ingiriiska oo booqanaya Canada.
Qoyska leh dhaxalka Boqortooyada Ingiriiska oo oo uu horkacayo amiirka dalkaasi William iyo Amiirad Kate oo ay wehliyaan caruurtooda kala ah amiir George iyo amiirad Charlotte ayaa booqanaya Canada oo ah dal hoos taga boqortooyada Ingiriiska oo ay boqorad haatan u tahay Queen Elisabeth. &...
Heesta Xurmo ee laga bililiqeystay fannaanka Axmed Rooble Cali Dayax oo original ah: DAAWO
Fannaanka caanka ah ee Axmed Rooble Cali “Dayax” oo ka mid ah fannaaniintii hore oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa bahda Jilaa.com waxay kasoo duubeen mid ka mid ah heesahiisa oo fannaaniinta jiilka danbe ay ka bililiqeysteen, isagoo sheegay in uu aad ugu xun yahay isbadalka fanka Soom...
Kylie Jenner oo deyn culus qoorta u galisay saaxiibkeed Tyga
Fanaanka raabka heesa ee Tyga ayaa waxaa muddooyinkaan lagu haystaa deyman tiro badan kuwaasoo gaaray maxkamad, waxaana haatan Tyga lagu haystaa deyn uu mujowharaad dahab ugu iibiyiyay gacalisadiisa reerka caanka ah ee Kardashian ee Kylie Jenner lagu magacaabo. Waxaa haatan Tyga saaxiibti...
Waa kuma Jilaaga ugu mushaarka badan Bollywood?
Shabakadda qiimeysa hantida iyo qarashka ay qaataan jilayaasha caalamka ee Forbes ayaa sanadkan qiimeysay Jilayaasha ugu mushaarka badan shirkada aflaamta Hindiya ee Bollywood iyadoo qarxisay lacagta lagu kireestay jilayaashaan sanadihii lasoo dhaafay taasoo lala yaabay maadaama ay qaarkoodba ka bad...
Angelina Jolie iyo ninkeeda Brad Pitt oo kala tagay , furriinkooda oo caalamka dhan laga dareemay
Jilayaasha caanka ah ahna lamaanahii ugu caansanaa ee Hollywood ee Angelina Jolie iyo Brad Pitt ayaa si rasmi ah u kala tagay ayadoo ay furriin ay dalbatay Angelina arrinkan uuku suurto galay. Waxaana galabta laga dareemay dhamaan caalamka iyadoo ay wargeysada u waaweyn dunida aad uga faaloode...
Nin si qalad ah 39 sano ku xernaa xabsi oo 1 milyan dollar loo siiyay magdhaw ahaan.
Nin madoow oo Mareykan ah 40 sano ku xernaa xabsi ku yaallo gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa gadaal laga ogaaday inuu wax dambi ah galin oo uu yahay shaqsi barii ah oo lagu eedeeyay inuu qof dilay taasoo aheyd mid qalad ah oo gardarro loogu hayay xabsiga intaas sanadood. ...
Gabdhaha Xijaaban oo fashionka caalamiga lagu soo daray markii u horeysay taariikhda. Daawo Sawirada
Waxaa barnaamijka xayeysiinta caalamiga dharka ee fashion-ka ee New York sanadkan lagu soo daray markii u horeysay dharka gabdhaha xijaabka wata ee Xijaabka ama qamaarka ah taasoo ah guul aad u weyn oo ay gaartay gabadha dharka naqshadeysa ee u dhalatay Indoneisa ee lagu magacaabo Aniessa Hasi...
K'naan: Dadkeyga iyo diinteeyda inaan kor u qaado mooyee waligey hoos uma dhigaayo
Fanaanka Soomaalieed ee Keynaan Warsame oo wareysi siinayay Somali TV Minnesotta ayaa ka hadlay dhacdadii lagu bannaday xafladiisii ka dhacday Minnesota taasoo ay kula banaanbaxeen fanaankaan filin uu soo saare ka yahay oo dhawaan soo baxi doona kaas oo uu sheegay in ay si qalad ah u fahmeed dadka S...
Xaaska Mo Farah ''Waxaan nahay Muslim laakin ma tukanno salaada''
Mo Farah xaaskiisa oo sheegtay in ay Muslim tahay laakiin aysan tukan. Tania Farah oo ah xaaska orodyahanka Soomaaliyeed ee caanka ah Mo Farah oo wareysi dheer siisay wargeyska Ingiriiska ee Sunday Telegraph kaasoo ay ugu warantay dhibaatadi iyo qashqashaaddii iyada iyo ninkeeda ay kala k...